WhatsApp dia manandrana tonian-dahatsoratry ny vondrona ao amin'ny beta ho an'ny iOS | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 23/09/2021 21:00 | Fampiharana iPhone, About us
Mivoatra tsy tapaka ny rindranasan-kafatra hafatra, mampifandray haitao vaovao izay mahasarika mpampiasa misimisy kokoa. WhatsApp dia niasa tamina asa maro nandritra ny volana maro tao amin'ny kinova beta izay hahita ny hazavan'ny andro amin'ny volana ho avy. Betsaka amin'ireo asa Mbola sedraina izy ireo saingy ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ny safidy ahafahana mampiasa fitaovana hafa handefasana hafatra nefa tsy misy ny finday. Androany dia fantatsika fa ny WhatsApp dia mampiditra asa vaovao ao amin'ny kinova beta: tonian-dahatsoratry ny vondrona, izay mamela anao hisoroka ireo sary masina miaraka amina volondavenona ankahalain'ny olona.
WhatsApp dia hisoroka ireo kisary vondrona banga
Amin'izao fotoana izao rehefa misy vondrona olona maromaro noforonina tao amin'ny WhatsApp a kisary volondavenona miaraka amina silhouette telo an'ny olona. Midika izany fa tsy nisy fanaingoana teo aloha. Raha te-hanova ny sarin'ny vondrona dia tsindrio fotsiny ny toe-draharaha ary kitiho eo amin'ny kisary fakan-tsary hikarohana sary amin'ny Internet na amin'ny finday.
Izany dia miova amin'ny kinova beta vaovao natolotry ny WhatsApp tao anatin'ny ora farany, tsikaritr'i WABetaInfo. Ity asa vaovao ity dia tonian-dahatsoratry ny vondrona izay mamela ny mpampiasa tsy mila avela foana ny kisary volondavenona. Ity mpamoaka lahatsoratra ity dia mamela anao hanova ny loko ambadika ary hiditra emojis. Misy ihany koa ny fizarana mamela anao manampy sticker fa tsy emojis. Izany dia hanome taratra mivantana ireo kisary vondrona izay tsy manana sary namboarina.
Raha manana ny kinova beta an'ny WhatsApp amin'ny iOS ianao dia azonao atao ny manamarina raha manana ny fiasa ampanaovina ianao amin'ny fipihana ny kisary fakantsary ao anatin'ny sarin'ny vondrona. Raha manana izany ianao dia hiseho ny safidy vaovao antsoina hoe 'Emoji & Stickers' ahafahanao mampihetsika ny tonian-dahatsoratra sy miloko ny sarin'ny vondrona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » WhatsApp dia manandrana ny tonian-dahatsoratry ny vondrona ao amin'ny beta ho an'ny iOS